I-Country Haven: Igumbi langasese, ukugeza, nokungena - I-Airbnb
I-Country Haven: Igumbi langasese, ukugeza, nokungena
475 okushiwo abanye
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Del & Judy
U-Del & Judy Ungumbungazi ovelele
Igumbi lokulala elikhulu langasese kanye negumbi lokugezela. Ukufinyelela okuyimfihlo ngaphandle kwendlu. Jabulela ukubukwa okuhle kwaseningizimu kwezintaba kanye nomfula i-Klamath kusuka ekamelweni lakho noma kuvulandi onamathiselwe. Ifakwe isiqandisi esincane, i-microwave, nebha yekhofi egcwele. I-Wildlife oasis. Izinyamazane, izigwaca, izinyoni zezinhlobonhlobo. Ukufinyelela kumahektha angama-30 ukuhamba izintaba noma ukuthatha izithombe. Sitholakala cishe ngamamayela ayi-6.5 entshonalanga kwe-Klamath Falls ukusuka ku-Hwy 66.
Sikumamayela angu-4 kuphela ukuya entshonalanga ukusuka e-Hwy 140 nase-Hwy 97 exchange
Itholakala kumakhilomitha angu-7 ukusuka edolobheni, indawo yethu inokuthula futhi inokuthula. Unokungena kwakho kwangasese. Umpheme ongaphambili, ofakwe itafula le-bistro nezihlalo, negceke langaphambili kufakwe endaweni yakho yangasese.
4.99 out of 5 stars from 475 reviews
4.99 · 475 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-475
Ibungazwe ngu-Del & Judy
Sihlonipha ubumfihlo bazo zonke izihambeli. Sizotholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo kukho konke ukuhlala kwakho. Uma uthanda ukuzijabulisa nabantu, nathi sinjalo. Sifuna zonke izivakashi zethu zizizwe zikhululekile futhi zijabulele i-Country Haven.
Sihlonipha ubumfihlo bazo zonke izihambeli. Sizotholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo kukho konke ukuhlala kwakho. Uma uthanda ukuzijabulisa nabantu, nathi sinjalo. Sifun…
UDel & Judy Ungumbungazi ovelele